लोक दोहोरीमा बर्षा
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १५:३१
सन्तोष बजगाई, काठमाण्डौं ।
कलाकार देशका गहना हुन । जस्ले कला र गलाको माध्ययमबाट देश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको मन जितेको छ उ नै एक सच्चा कलाकार हो । कलाकार आफैमा एउटा मर्यादित शव्द र पेशापनि हो । कलाकारले कला कै माध्ययमबाट भाषा, संस्कृति, परम्परा र रितिरिवाजको संरक्षण र विकासमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा योगदान पु¥याइरहेका हुन्छन् । तिनै कलाकारहरुको कलाको सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप आफ्नो कला र गला प्रस्तुत गरेर पछिल्लो समय लोक दोहोरी गायनमा आफुलाई परिचित बनाउन लागिपरेकी एक जना संघर्षशिला गायीका बर्षा सिल्वालसंग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं । उहाँको सांगीतिक यात्रा र संघर्ष एवं भविष्यका योजना के गरेको छ त ? प्रस्तुत छ यस विषयमा उहाँसंग गरिएको कुराकानी ।
तपाइको परिचय आफ्नै शब्दमा बताइदिनुस् न ?
हजुर धन्यवाद, सर्वप्रथम सम्पुर्णमा नमस्कार । म कलाकार तथा लोक दोहोरी गायिका बर्षा सिल्वाल । मेरो घर ललितपुर भट्टेडाडा भन्ने ठाउँमा हो । म लोक दोहोरी क्षेत्रमा क्रियाशिल छु ।
तपाइको साँगितिक यात्रा, दुःख र संघर्षको बारेमा बताइदिनुस् न ?
गीत संगीतमा लाग्दा धेरै दुःख गरेको छु । धेरै दिन भोकै बसेर पनि काम गरेको छु । कलाकारीता क्षेत्रमा संघर्ष त धेरै हुन्छन् नी, त्यसमाथि छोरी मान्छे धेरै नै चुनौतिहरु आए तर त्यसलाई स्विकार गर्दै निरन्तर संर्घषरत नै छु ।
तपाईले यो संगीत क्षत्रमा लागेर के पाउनु भो र भबिस्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
मैले गीत संगीतमा लागेर म बर्षा सिल्वाल हो भनेर आफ्नो दर्शक श्रोताहरुलाई चिनाउन पाएकी छु । यहि हो मैले पाएको भनेको । एउटा कलाकारको लागी दर्शक श्रोताको माया भन्दा बढि त अरु के नै हुन्छ र ? र अर्को कुरा यस क्षेत्रमा भविष्यकै कुरा गर्दा त अहिले जीवन धान्न नै यहि पेशा त अलि प्रयाप्त छैन तर अव भविष्यमा केहि त होला कलाकारको लागि त्यहि आशामा छु । मैले दर्शक श्रोताको माया पाईरहेकै छु यहि हो मेरो लागि ठूलो उपलब्धी यो क्षेत्रमा लागेर मैले कमाएको यहि हो सबैको माया ।
तपाइले गाएका गितहरुको बारेमा भन्नुस् न ?
मैले गाएको गितहरु धेरै छन कति गीतले रुवाउँछ भने कति गीतहरुले खुशी बनाउँछ र मैले गाएको सबै गीतहरुलाई म उतिकै माया गर्छु । मैले गाएको सबै गीतहरु मेरो सन्तान हुन र ती सन्तानहरुलाई म बचाएर राख्ने छु । यसको लागि हामी जस्तो कलाकारको लागि साथ सहयोग हौसला र दर्शक श्रोताको माया भने सदैव चाहिन्छ । लोक दोहोरी, तिजको, दशैको थुप्रै गीतहरु छन् मैले गाएका ।
भबिस्यमा तपाईको योजना के रहेको छ, यो गीत संगीतको क्षेत्रमा लागेर ?
एउटा कलाकार भएपछि दर्शक श्रोताले नयाँ कोशेलीहरु हेर्न र सुन्न मन गरिरहनु भएको हुन्छ त्यसैले यहि कलाकारितालाई नै निरन्तरता दिन्छु । म सक्दो राम्रो प्रस्तुतीहरु लिएर आइरहने छु दर्सक श्रोता सामु । यिनै हुन अरु खासै योजना छैन । यहि क्षेत्रमा निरन्तर छु र रहन्छु ।
आजभोलि के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
आजभोलि यहि गीतसंगीत मै बिजि छु । स्टेज प्रोग्राम, रेकडिङ, शुटिङ्ग अन्य यसैसंग सम्बन्धीत कामतिर अनि नयाँ गीतको पनि तयारी भैरहेको छ यहि नै हो । एउटा नयाँ गीत आउँदै छ छिट्टै बजारमा प्रकाश पुरीसंगको सहकार्यमा यसकै तयारीमा छु ।
र अन्तमा केहि भन्नु छ ? मैले सोध्न छुटाएको ?
खासै केहि छैन त्यस्तो त । सबै मेरा दर्शक श्रोताहरुलाई मेरो गीत सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् कमी कमजोरीहरु भए औंलाएर मलाई अझै अगाडी बढ्न प्रेरणा दिनुस् भन्न चाहान्छु । र तपाईलाईपनि धन्यवाद मेरो कुराहरु दर्शक श्रोता र पाठकहरुमा पु¥याईदिनु भएकोमा ।
पासाङको ‘टारी खेत’मा पुष्प र एलिशा सार्वजनिक ( भिडियो )